विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बेच्ने कम्पनी को र कति नम्बरमा ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
विश्व बजारमा सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बेच्ने कम्पनी को र कति नम्बरमा ?
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २
एजेन्सी । विश्वमा अहिले यस्ता मानिसहरु निकै कम होलान् जसले स्मार्टफोन प्रयोग गर्दैनन् । अपवादबाहेक स्मार्टफोन आज विश्वका अधिकांश मानिसहरुका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै बनेको छ । प्रविधिको विकास सँगसँगै मोबाइल फोन अब फोन मात्र रहेन, स्मार्टफोन बनेको छ ।
४. ओप्पोः स्मार्टफोन बिक्रीको मामिलामा चौथो नम्बरमा छ, चिनियाँ स्मार्टफोन ओप्पो । गत वर्ष कम्पनीले विश्व बजारमा २ करोड ७८ लाख स्मार्टफोन बेचेको छ । विश्व बजारमा यसको हिस्सा ८ दशमलब १ प्रतिशत रहेको छ । यो कम्पनीले आफ्नो बजार तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ ।